Marxaladaha Kala Duwan Ee Murugada - Daryeel Magazine
Marxaladaha Kala Duwan Ee Murugada
Murugadu waa dareen aynu dareeno markay hawl culus na qabsato, ha ahaato geeri dhacday, shaqo lagaa erya, asxaab daruuftu idin kala fogaaysay, jacayl ku helay. Wax ka qabashada murugada hawl fudud maaha. Hadaba si aad dareenkan ula macaamishid waa lagamaarmaan inaad fahantid marxaladaha murugada.
-Diidmada (Denial): waa marxalada ugu horeeaysa murugada. Diidmadu waa adigo diidan waxan dhacay ama dafiraya oo is aaminsiiye inay rajo jirto ama aan dhici karin. Waa qaab isdifaac ah oo aad iskaga caabinaysid murugada oo Ilaahay nagu abuuray si aanad shoog u galin ama aanu wadnuhu kugu xanuunin
-Cadho: markaad isdifaaca ka baxdid waxa xiga cadho aad ka cadhoonaysid waxa dhacay ee murugada kugu keenay—cadho aad u cadhoonaysid jacaylkaaga, wadankaaga, aduunka, naftaada. Cadhada laba qaybood u kala baxaysa mid aad si aan qarsoonayn u cabiraysid iyo cadho aad cabudhinaysid. Cadha aad cabudhisid waxay noqonaysa mid aad naftaada u cadhoonaysid aad eeda is saaraysid aad is odhanaysid “hadaan sidaa samayn lahaa sida umay dhacdeen.” Waa inaad si wanaagsan u aqoonsataa cadhada ka dibna aad sida ugu haboon ula dhaqantid si aanad dad kale ama naftaadaba u dhaawacin ama erayo xun u odhan.
-Gorgortan: marxaladan waxa ku galaya doonitaan aad doonaysid inaad sidaadi hore noloshaada ugu celisid. Wuxu noqon kara gorgortan aad Ilaahay la galaysid aad odhanaysid “waan toobad keenay Ilaaho xanuunkan iga dul qaad.”
-Depression: marxaladani waa marxaladaha ugu adag ee murugada. Marku depression ku helo cidlo badan iyo murugo badan ayaad dareenmaysa, waxyabaha aad xiisayn jirtay xiisayn maysid, cuntada iska kaa xidhaysa, culays badan ayaad dareenmaysa. Waa marku qofku dhaho Ilaahay mu nafta iga qaado maxaan ka noolahay. Waa jawab celin dabiici ah u insaanku ugu jawaab celiyo murugada culus. Waa inaad aaminta qadarka Ilaahay oo u samirtaa dhibaatada ku haysata.
-Aqbalaad: depression-ka waxa xiga aqbalaada aad aqbalaysid dhibaatada kugu dhacday. Macnahaydu maaha murugadii waad ka baxday laakin waa marxalada lagaga sii baxayo, aqbalaadu waxay ka dhigan tahay inaad diyaar u tahay inaad noloshaada hore u socotid.
7 Qodob Oo Ay Ku kala Duwan Yihiin Dadka Nolosha Guul Ka Gaara Iyo Kuwa Guuldareysta Professor iyo Bad-Maax maxaa kala qabsaday! Sidee U Noqon Kartaa Qof La Jecelyahay?